13 Ngemva kwalokho u-Abrama wakhuphuka waphuma eGibhithe, yena nomkakhe nakho konke ayenakho, noLoti kanye naye, waya eNegebhi.+ 2 U-Abrama wayenemihlambi emikhulu nesiliva negolide eliningi kakhulu.+ 3 Waphuma eNegebhi wahamba ekanisa waya eBhethele, lapho kwakukhona itende lakhe ekuqaleni phakathi kweBhethele ne-Ayi,+ 4 endaweni ye-altare ayelenze ekuqaleni;+ u-Abrama wabiza lapho egameni likaJehova.+ 5 ULoti, owayehamba no-Abrama, naye wayenezimvu nezinkomo namatende. 6 Ngakho indawo ayibavumelanga ukuba bahlale ndawonye, ngoba impahla yabo yayisiningi futhi bengasakwazi ukuhlala bonke ndawonye.+ 7 Kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bemfuyo ka-Abrama nabelusi bemfuyo kaLoti; ngaleso sikhathi kwakuhlala amaKhanani namaPherizi ezweni.+ 8 Ngakho u-Abrama wathi kuLoti:+ “Ngiyacela, makungabikho kuxabana okuqhubeka phakathi kwami nawe naphakathi kwabelusi bakho nabelusi bami, ngoba thina siyazalana.+ 9 Izwe lonke alikho yini esandleni sakho? Ngiyacela, masihlukane. Uma uya kwesobunxele, mina ngizoya kwesokunene; kodwa uma uya kwesokunene, mina ngizokuya kwesobunxele.”+ 10 Ngakho uLoti waphakamisa amehlo akhe wasibona sonke isiFunda saseJordani+ ukuthi sonke sasiyisifunda esithola amanzi anele uJehova engakalichithi iSodoma neGomora, futhi sasinjengensimu kaJehova,+ sinjengezwe laseGibhithe kuze kufike eZowari.+ 11 Khona-ke uLoti wazikhethela sonke isiFunda saseJordani, futhi uLoti wathutha ikamu lakhe waya empumalanga. Ngakho-ke bahlukana. 12 U-Abrama wahlala ezweni laseKhanani, kodwa uLoti wahlala phakathi kwemizi yasesiFundeni.+ Ekugcineni wagxumeka itende eduze kwaseSodoma. 13 Amadoda aseSodoma ayemabi futhi eyizoni ezinkulu kuJehova.+ 14 Ngemva kokuba uLoti esehlukene naye, uJehova wathi ku-Abrama: “Ngicela uphakamise amehlo akho ukuleyo ndawo okuyo, ubheke ngasenyakatho nangaseningizimu nangasempumalanga nangasentshonalanga,+ 15 ngoba lonke leli zwe olibhekile, ngiyolinika wena nenzalo yakho kuze kube nini nanini.+ 16 Futhi ngiyokwenza inzalo yakho ibe njengezinhlayiya zothuli lomhlaba, kangangokuthi, uma umuntu engase akwazi ukubala izinhlayiya zothuli lomhlaba, khona-ke nenzalo yakho iyokwazi ukubalwa.+ 17 Sukuma, hambahamba ezweni udabule ubude balo nobubanzi balo, ngoba ngiyolinika wena.”+ 18 Ngakho u-Abrama waqhubeka ehlala ematendeni. Kamuva weza wahlala phakathi kwemithi emikhulu kaMamre,+ eseHebroni;+ futhi lapho wakhela uJehova i-altare.+